Kulamadii ugu danbeeyay horyaalka - BBC Somali
Kulamadii ugu danbeeyay horyaalka
Chelsea waxay 2-1 ku martay Manchester City. Sunderland waxay 2-1 uga badisay Newcastle oo ah koox uu ka dhexeeyo xafiltan aad u weyn kulankii ugu horreeyay ee afar ciyaarood oo galabta dhacay.
Chelsea waxay soo gashay kaalinta 2aad oo 20 dhibcood ayay yeelatay, Man City-na kaalinta 7aad ayay hoos ugu dhacday oo 16 dhibcood ayay leedahay.
Arsenal shalay way badiyeen waxayna horyaalka ku hoggaaminaysaa 22 dhibcood. Waxaa kaalinta 3aad ku jirta Liverpool oo 20 dhibcood leh kaddib markii ay iyaduna 4-1 ku xaaqday kooxda West Brom laakiin Chelsea ayaa ka goolal badan.
Manchester United waxay mar kale ku sigatay in shalay galab laga badiyo kaddib markii ciyaar ay la yeesheen kooxda Stoke inta badan lagala horreeyay goolasha hase ahaatee waxay ku dhammaatay 3-2 ay ku badisay United.
Iska hor imaadyo kale oo aad u adag waxay galabta dhexmareen Kooxaha Swansea iyo West Ham oo 0-0 isla dhaafi waayay iyo Tottenham oo 1-0 uga dkaatay kooxda Hull.
Tartanka horyaalka Ingiriisku sanadkan si la yaab leh ayuu ku socdaa iyadoo aan la saadaalin karin kooxda sanadkan horyaalka ka soo qaadi doonta Manchester United oo sanadkii hore ku guulaysatay.